အသက်(၆)နှစ်ကနေ (၈)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်များရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပုံနဲ့ ထိန်းကျောင်းနည်းများ – For her myanmar
အသက်(၆)နှစ်ကနေ (၈)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်များရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပုံနဲ့ ထိန်းကျောင်းနည်းများ
Posted on February 28, 2019 February 28, 2019 Author Yin Sandi Ko	Comment(0)
အရွယ်စပြောင်းတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေကို ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းကြမလဲ
ယာင်းတို့ရေ ကလေးငယ်တွေက အသက်(၆)နှစ်ကနေ (၈)နှစ်ကြား အသက်အပိုင်းအခြားမှာ ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ထွန်းလာပါပြီ။ ကိုယ့်အင်္ကျီကို လဲတတ်နေသလို ကိုယ့်ဖိနပ်ကြိုးကို ကိုယ်တိုင်ချည်တတ်နေပါပြီ။ ဘောလုံးဆော့တဲ့အခါမှာလည်း ဘောလုံးကို လွယ်လွယ်ကူကူ လိုက်ဖမ်းတတ်နေပါပြီ။ ဒီတော့ ပိစိကွေးအရွယ်တုန်းကလို မိခင်က နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး အကုန်လိုက်လုပ်ပေးနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး ယောင်းရေ။ နောက်ပြီး ကျောင်းစတက်နေတဲ့ အရွယ်လေးတွေဆိုတော့ မိသားစုအပြင် သူစိမ်းတွေနဲ့ပါ ထိတွေ့ဆက်ဆံလာရပါပြီ။ ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမယ် မပေါင်းဘူးဆိုတာတွေလည်း ရှိလာပါပြီ။ ဒီလိုမျိုး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ မြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးတက်လာနေတဲ့အချိန်မှာ ယောင်းတို့အနေနဲ့ ကောင်းကောင်းပျိုးထောင်ပေးနိုင်မှသာ ဘက်စုံတော်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်မှာပါ ယောင်းရေ။
ဒီအရွယ်လေးတွေမှာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲနေပြီလဲဆိုတော့
မိသားစုရဲ့ အကူအညီမပါဘဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်လာပါတယ်။ (ရေချိုးတာ၊ ထမင်းစားတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်ချင်လာပါပြီ)
အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကို ပြောလာပါပြီ။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေချင်လာပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကို သဘောကျတာကို လိုချင်လာပါတယ်။
အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် သင်ကြားရေး ဘာတွေ ပြောင်းလဲနေပြီလဲဆိုတော့
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်လာပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ အယူအဆတွေကို လက်တွေ့ကျကျ ပြောလာနိုင်ကြပါပြီ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော သူများကိုပါ ဂရုစိုက်တတ်လာပါတယ်။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ယောင်းတို့အနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲ
ကလေးကို အားပေးပါ။ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုသေးသေးလေးတွေကအစ ချီးကျူးပေးပါ။
ကလေးနဲ့ သူ့ရဲ့ ကျောင်းအကြောင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သူ့ရည်မှန်းချက်တွေအကြောင်း ပြောကြည့်ပါ။
သူများကို လေးစားတတ်ဖို့ ကူညီတတ်ဖို့ သင်ပေးပါ။
သူရည်မှန်းချက်သေးသေးလေးတွေ ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်တတ်ဖို့ ကူညီပေးပါ။
တစ်ခုခုမလုပ်ခင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်ကို အရင်စဉ်းစားဖို့ ပြောပြပါ။
စည်းကမ်းတွေ သတ်မှတ်ထားပြီး အတိအကျလိုက်နာပါစေ။
ဘယ်လို အပြုအမူမျိုးက ရိုင်းတယ်။ ဘယ်ဟာကတော့ လုပ်လို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြထားပါ။
မိသားစုတွေ စုဝေးပြီး ကစားတာ၊ အပန်းဖြေခရီးသွားတာ၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ အတူတူကူညီတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးပါ။
ကလေးရဲ့ ကျောင်းကိစ္စတွေကို စိတ်ဝင်စားပါ။ ဆရာတွေနဲ့ မကြာခဏတွေ့ပြီး ကလေးလိုအပ်ချက်တွေကို သိအောင်၊ ကူညီနိုင်အောင် လုပ်ကြည့်ပါ။
ကလေးကို ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပဲ စာဖတ်ပြပေးပါ။ သူကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဖတ်တတ်လာပြီဆိုရင် သူနဲ့ အဖော်လုပ်ပြီး တူတူစာဖတ်ပေးပါ။
စည်းကမ်းနဲ့ထိန်းသိမ်းပါ။ တစ်ခုခုမှားတာနဲ့ အပြစ်တန်းမပေးဘဲ ဘာကြောင့် လုပ်သင့်တယ်၊ ဘာကြောင့် မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာကို သေချာရှင်းပြပါ။
ချီးကျူးစရာရှိရင် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချီးကျူးပါ။
ကလေးရဲ့ အခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင် ကူညီပါ။ (ဥပမာ ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းနဲ့ ရန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် သင့်မြတ်အောင် ပြန်လုပ်ဖို့ အားပေးပါ။)
ကျောင်းနဲ့ တခြားလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်ဖို့ အားပေးပါ။ (ဥပမာ ကျောင်းတွင်းအားကစားပွဲတွေ၊ လုပ်အားပေးအစီအစဉ်တွေ)
ဒီအရွယ်လေးတွေက လှုပ်လှုပ်ရှားရှားကစားပြီး အိမ်ကလည်း နောက်က တကောက်ကောက်လိုက်ဖို့ မလိုတဲ့အတွက် မကြာခဏဆိုသလို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက မတော်တဆ ယာဉ်တိုက်မှုတွေကလည်း ဒီကလေးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ဒီတော့ ယောင်းတို့ဘာတွေကို သတိထားရမလဲဆိုရင်-
ကလေး ကားထဲမှာပါတယ်ဆိုရင် ပိုပြီးဂရုစိုက်ရပါမယ်။
ကလေးကို ကားလမ်းကူးနည်း၊ ကျောင်းကို လမ်းလျှောက်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ စက်ဘီးစီးရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ အပြင်မှာ ဆော့ရင်ဖြစ်ဖြစ် အန္တရာယ်ကင်းကင်းရှိနိုင်အောင် သင်ထားပေးပါ။
အဲ့လိုပဲ ရေကူးရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ရေစပ်မှာဆော့ရင်ဖြစ်ဖြစ် အန္တရာယ်ကင်းကင်းဆော့နိုင်အောင် ပြောပြထားပါ။
နည်းနည်းအန္တရာယ်များတဲ့အလုပ် (ဥပမာ အမြင့်တက်တာမျိုး) လုပ်မယ်ဆိုရင် မိဘကဝိုင်းထိန်းပေးပါ။
အန္တရာယ်ဖြစ်လို့ အကူအညီလိုရင် ဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုတာကိုပါ သင်ထားပေးပါ။
ကလေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်း (ဥပမာ ဓား၊ မီးခြစ်)တွေကို အလွယ်တကူ ယူလို့မရနိုင်တဲ့ နေရာမှာထားပါ။
ကျန်းကျန်းမာမာ ကြီးပြင်းလာဖို့ ယောင်းတို့ဘာတွေ လုပ်ပေးရမလဲ
အာဟာရရှိတဲ့ ကျောင်းထမင်းဘူးထည့်ပေးပါ။ ဒါမှအပြင်က အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရတဲ့ သကြားများ၊ ဆားများ၊ အဆီများတဲ့ အစားအစာတွေ၊ အအေးတွေ မသောက်ဖြစ်တော့မှာပါ။
တစ်ရက်ကို အနည်းဆုံး တစ်နာရီလောက် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ကစားပါစေ။
တီဗီ ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းသုံးတာဖြစ်ဖြစ် တစ်ရက်ကို တစ်နာရီ နှစ်နာရီထက် ပိုမသုံးပါစေနဲ့။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာကို ရွေးချယ်စားသောက်ဖို့၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေဖို့ ခုအရွယ်ကတည်းက လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ စံပြအနေနဲ့ မိဘတွေက အိမ်မှာကတည်းက နေပြထားသင့်ပါတယ်။
ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဒီအသက်အပိုင်းခြားက သားသားမီးမီးလေးတွေကို ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ရမလဲဆိုတာ ယောင်းတို့နားလည်သွားလောက်ပါပြီနော်။ သားသားမီးမီးလေးတွေကို ထူးချွန်ထက်မြက်လာအောင် အကောင်းဆုံးပြုစုပေးနိုင်တဲ့ စံပြမိဘတွေ ဖြစ်လာနိုင်ကြပါစေယောင်းတို့ရေ….
အရှယျစပွောငျးတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတှကေို ဘယျလိုထိနျးကြောငျးကွမလဲ
ယောငျးတို့ရေ ကလေးငယျတှကေ အသကျ(၆)နှဈကနေ (၈)နှဈကွား အသကျအပိုငျးအခွားမှာ ကွီးမားတဲ့ ပွောငျးလဲမှုတှဖွေဈထှနျးလာပါပွီ။ ကိုယျ့အင်ျကြီကို လဲတတျနသေလို ကိုယျ့ဖိနပျကွိုးကို ကိုယျတိုငျခညျြတတျနပေါပွီ။ ဘောလုံးဆော့တဲ့အခါမှာလညျး ဘောလုံးကို လှယျလှယျကူကူ လိုကျဖမျးတတျနပေါပွီ။ ဒီတော့ ပိစိကှေးအရှယျတုနျးကလို မိခငျက နောကျက တကောကျကောကျလိုကျပွီး အကုနျလိုကျလုပျပေးနစေရာ မလိုတော့ပါဘူး ယောငျးရေ။ နောကျပွီး ကြောငျးစတကျနတေဲ့ အရှယျလေးတှဆေိုတော့ မိသားစုအပွငျ သူစိမျးတှနေဲ့ပါ ထိတှဆေ့ကျဆံလာရပါပွီ။ ဘယျသူနဲ့ပေါငျးမယျ မပေါငျးဘူးဆိုတာတှလေညျး ရှိလာပါပွီ။ ဒီလိုမြိုး ရုပျပိုငျးဆိုငျရာရော စိတျပိုငျးဆိုငျရာပါ မွနျမွနျဆနျဆနျတိုးတကျလာနတေဲ့အခြိနျမှာ ယောငျးတို့အနနေဲ့ ကောငျးကောငျးပြိုးထောငျပေးနိုငျမှသာ ဘကျစုံတျောတဲ့ ကလေးတဈယောကျဖွဈလာနိုငျမှာပါ ယောငျးရေ။
ဒီအရှယျလေးတှမှော ဘာတှေ ပွောငျးလဲနပွေီလဲဆိုတော့
မိသားစုရဲ့ အကူအညီမပါဘဲ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးတတျလာပါတယျ။ (ရခြေိုးတာ၊ ထမငျးစားတာ ကိုယျ့ဟာကိုယျ လုပျခငျြလာပါပွီ)
အနာဂတျမှာ ဘာဖွဈခငျြတယျဆိုတာကို ပွောလာပါပွီ။
သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး အဆငျပွခေငျြလာပါတယျ။
သူငယျခငျြးတှကေ သူ့ကို သဘောကတြာကို လိုခငျြလာပါတယျ။
အတှေးအချေါပိုငျးဆိုငျရာနှငျ့ သငျကွားရေး ဘာတှေ ပွောငျးလဲနပွေီလဲဆိုတော့
စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အရညျအခငျြးတှေ တိုးတကျလာပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ အတှေးအချေါတှေ အယူအဆတှကေို လကျတှကေ့ကြ ပွောလာနိုငျကွပါပွီ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုရော သူမြားကိုပါ ဂရုစိုကျတတျလာပါတယျ။
ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ ယောငျးတို့အနနေဲ့ ဘာတှလေုပျပေးနိုငျမလဲ
ကလေးကို အားပေးပါ။ သူ့ရဲ့ အောငျမွငျမှုသေးသေးလေးတှကေအစ ခြီးကြူးပေးပါ။
ကလေးနဲ့ သူ့ရဲ့ ကြောငျးအကွောငျး၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ သူ့ရညျမှနျးခကျြတှအေကွောငျး ပွောကွညျ့ပါ။
သူမြားကို လေးစားတတျဖို့ ကူညီတတျဖို့ သငျပေးပါ။
သူရညျမှနျးခကျြသေးသေးလေးတှေ ကိုယျတိုငျသတျမှတျတတျဖို့ ကူညီပေးပါ။စိတျရှညျသညျးခံတတျအောငျ သငျပေးပါ။
တဈခုခုမလုပျခငျ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ အကြိုးဆကျကို အရငျစဉျးစားဖို့ ပွောပွပါ။
စညျးကမျးတှေ သတျမှတျထားပွီး အတိအကလြိုကျနာပါစေ။
ဘယျလို အပွုအမူမြိုးက ရိုငျးတယျ။ ဘယျဟာကတော့ လုပျလို့ ဖွဈတယျဆိုတာကို ရှငျးပွထားပါ။
မိသားစုတှေ စုဝေးပွီး ကစားတာ၊ အပနျးဖွခေရီးသှားတာ၊ လူမှုရေးကိစ်စတှမှော အတူတူကူညီတာမြိုးတှေ လုပျပေးပါ။
ကလေးရဲ့ ကြောငျးကိစ်စတှကေို စိတျဝငျစားပါ။
ဆရာတှနေဲ့ မကွာခဏတှပွေီ့း ကလေးလိုအပျခကျြတှကေို သိအောငျ၊ ကူညီနိုငျအောငျ လုပျကွညျ့ပါ။
ကလေးကို ငယျငယျတုနျးကလိုပဲ စာဖတျပွပေးပါ။ သူကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ ဖတျတတျလာပွီဆိုရငျ သူနဲ့ အဖျောလုပျပွီး တူတူစာဖတျပေးပါ။
စညျးကမျးနဲ့ထိနျးသိမျးပါ။ တဈခုခုမှားတာနဲ့ အပွဈတနျးမပေးဘဲ ဘာကွောငျ့ လုပျသငျ့တယျ၊ ဘာကွောငျ့ မလုပျသငျ့ဘူးဆိုတာကို သခြောရှငျးပွပါ။
ခြီးကြူးစရာရှိရငျ လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ ခြီးကြူးပါ။
ကလေးရဲ့ အခကျအခဲကိုရငျဆိုငျနိုငျအောငျ ကူညီပါ။ (ဥပမာ ကြောငျးမှာ သူငယျခငျြးနဲ့ ရနျဖွဈလာတယျဆိုရငျ သငျ့မွတျအောငျ ပွနျလုပျဖို့ အားပေးပါ။)
ကြောငျးနဲ့ တခွားလူမှုရေးကိစ်စတှမှော ပါဝငျဖို့ အားပေးပါ။ (ဥပမာ ကြောငျးတှငျးအားကစားပှဲတှေ၊ လုပျအားပေးအစီအစဉျတှေ)
ဒီအရှယျလေးတှကေ လှုပျလှုပျရှားရှားကစားပွီး အိမျကလညျး နောကျက တကောကျကောကျလိုကျဖို့ မလိုတဲ့အတှကျ မကွာခဏဆိုသလို ထိခိုကျဒဏျရာရတတျပါတယျ။ နောကျတဈခုက မတျောတဆ ယာဉျတိုကျမှုတှကေလညျး ဒီကလေးတှမှော အဖွဈမြားပါတယျ။
ဒီတော့ ယောငျးတို့ဘာတှကေို သတိထားရမလဲဆိုရငျ-
ကလေး ကားထဲမှာပါတယျဆိုရငျ ပိုပွီးဂရုစိုကျရပါမယျ။
ကလေးကို ကားလမျးကူးနညျး၊ ကြောငျးကို လမျးလြှောကျသှားရငျဖွဈဖွဈ၊ စကျဘီးစီးရငျဖွဈဖွဈ၊ အပွငျမှာ ဆော့ရငျဖွဈဖွဈ အန်တရာယျကငျးကငျးရှိနိုငျအောငျ သငျထားပေးပါ။
အဲ့လိုပဲ ရကေူးရငျဖွဈဖွဈ၊ ရစေပျမှာဆော့ရငျဖွဈဖွဈ အန်တရာယျကငျးကငျးဆော့နိုငျအောငျ ပွောပွထားပါ။
နညျးနညျးအန်တရာယျမြားတဲ့အလုပျ (ဥပမာ အမွငျ့တကျတာမြိုး) လုပျမယျဆိုရငျ မိဘကဝိုငျးထိနျးပေးပါ။
အန်တရာယျဖွဈလို့ အကူအညီလိုရငျ ဘယျလိုတောငျးရမလဲဆိုတာကိုပါ သငျထားပေးပါ။
ကလေးအတှကျ အန်တရာယျရှိနိုငျတဲ့ပစ်စညျး (ဥပမာ ဓား၊ မီးခွဈ)တှကေို အလှယျတကူ ယူလို့မရနိုငျတဲ့ နရောမှာထားပါ။
ကနျြးကနျြးမာမာ ကွီးပွငျးလာဖို့ ယောငျးတို့ဘာတှေ လုပျပေးရမလဲ
အာဟာရရှိတဲ့ ကြောငျးထမငျးဘူးထညျ့ပေးပါ။ ဒါမှအပွငျက အလှယျတကူ ဝယျလို့ရတဲ့ သကွားမြား၊ ဆားမြား၊ အဆီမြားတဲ့ အစားအစာတှေ၊ အအေးတှေ မသောကျဖွဈတော့မှာပါ။
တဈရကျကို အနညျးဆုံး တဈနာရီလောကျ လှုပျလှုပျရှားရှား ကစားပါစေ။
တီဗီ ကွညျ့တာဖွဈဖွဈ၊ ဖုနျးသုံးတာဖွဈဖွဈ တဈရကျကို တဈနာရီ နှဈနာရီထကျ ပိုမသုံးပါစနေဲ့။
ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအစာကို ရှေးခယျြစားသောကျဖို့၊ လှုပျလှုပျရှားရှားနဖေို့ ခုအရှယျကတညျးက လကေ့ငျြ့ထားသငျ့ပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈဖို့ စံပွအနနေဲ့ မိဘတှကေ အိမျမှာကတညျးက နပွေထားသငျ့ပါတယျ။
ကဲဒီလောကျဆိုရငျတော့ ဒီအသကျအပိုငျးခွားက သားသားမီးမီးလေးတှကေို ဘယျလိုပွုစုပြိုးထောငျရမလဲဆိုတာ ယောငျးတို့နားလညျသှားလောကျပါပွီနျော။ သားသားမီးမီးလေးတှကေို ထူးခြှနျထကျမွကျလာအောငျ အကောငျးဆုံးပွုစုပေးနိုငျတဲ့ စံပွမိဘတှေ ဖွဈလာနိုငျကွပါစယေောငျးတို့ရေ….
Tagged baby, Development, parent, take care, teaching, training,ုknowledge
ပိတ်ရက်မှာပျင်းထားသမျှ တနင်္လာနေ့မှာလန်းစေမယ့် နည်းလမ်း(၅)မျိုး
Posted on May 28, 2017 Author Christina Rosy
မနက်ဖြန် တနလာင်္နေ့ဆိုတာ တွေးလိုက်တိုင်း ရင်မောလွန်းလို့။ ပျင်းလို့မှမ၀သေးတာ။
Posted on October 3, 2017 October 4, 2017 Author Myat Lay
ယောင်းတို့ရေ…အမျိုးသမီးနဲ့ နိုင်ငံရေး မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးကို အခုပဲ ခေါင်းထဲက ထုတ်လိုက်ရအောင်…
ဘာကြောင့် ရာသီစက်ဝန်းက နောက်ကျနေရတာလဲ?
Posted on August 3, 2017 Author Akari
သူမလာတာ သုံးလေးငါးရက်ကြာပြီရှင်…. အဟဲ.. ဒီသီချင်းလေးကို ကြားရင် အက်ဒ်မင်တော့ မိန်းခေးကိစ္စပဲ ပြေးပြေးသတိရတာပဲ..
ဘယ်ရာသီခွင်တွေက အားကစားလုပ်ရမှာ အပျင်းဆုံးဖြစ်မလဲ 🤔